Ụbọchị My Pet » 12 Ga Haves N'ihi anabata Enyemaka. Right
emelitere ikpeazụ: Dec. 09 2019 | 2 min agụ
1. Onye bụ omiiko banyere ndụ ya ma na-a itule. Ọ ga-abụ ya banye ná mmekọrịta ịhụnanya, ya na ezinụlọ ya, ya na-arụ ọrụ, ya na onwe. Onye bụ omiiko banyere ya gburugburu bi n'ike mmụọ nsọ ndụ. Anyị nile pụrụ eji obere n'ike mmụọ nsọ.
2. Onye nwere obi ike na-adịghị ike mgbe ọ dị mkpa na olu ike mgbe ọ dị mkpa. Ọ na-ahọrọ na-emeghe ka ndị nwere onwu ya na ya ma, ọ bụ ike ịbịaru doro anya ókè mgbe ọ dị mkpa.
3. Onye ị pụrụ onwe gị na-. A onye na-adịghị na-awụlikwa elu ikpe ma iru eru aka ịghọta na achọpụta na ọ bụ otu onye ahụ nwere ike na-ekweta okwu na-adabaghịrị.
4. Onye Ekele na 3 njọ flaws banyere gị na ị ịja ha 3 njọ flaws. Inyerịta bụ isi. Chọta onye ga-eme ka ndụ gị dị ka ị na-eme hers. Long agwụ checklists na-adịghị na-atọhapụ; ọ bụ a shackle na mma.
5. Onye na-ahọrọ na-enwe obiọma kama nri. Site odibo ka enweghị ebe obibi onye na n'okporo ámá ka ya onwe ya.
6. Onye nwere ike ikwu na ọ bụ ndo. M na-ahụ na-adị njikere ikweta mmejọ bụ oké nzọụkwụ kwupụta na-agwọ ọrịa. Ọtụtụ mgbe ugboro, na dị mma.
7. Onye bụ oké conversationalist. Ị dị nnọọ n'anya na-ekwu okwu ya n'ihi na ọ bụ otú multi-faceted na-akpali.
8. Onye ọgụgụisi ọchịchọ ịmata. Ọ na-ajụ, dị nnọọ banyere ihe nile, na-eche banyere rụọ ya na-adịghị kwụsị ịmụ.
9. Onye chọrọ na-aga site mgbe ihe siri ike na gị. O nwere ndị ahịhịa na-eguzo site na gị na-akwado gị mgbe ihe na-aga n'ebe ndịda.
10. Onye na-elekọta ya anu ulo. Ọ na-eme ka ji n'aka na ha na-ahụ ike, dị ọcha ma na-enwe obi ụtọ. Ọ bụrụ na ọ na-azọrọ na ọ hụrụ n'anya n'anya ya anu ulo ma ha nọ a steeti disarray, were ọ bụrụ na ọ hụrụ gị n'anya? Ị ga-esi m ipu.
11. Onye anọgide na-eme obere ihe ị. Ụbọchị na ụbọchị nraranye nke na-eme ihe ndị a na-ekwu ọtụtụ.
12. Onye nwere yiri ego echiche. Ị chọrọ iru a anụ ego ga-eme n'ọdịnihu otú i nwere ike na-enweta mmekọrịta gị. Ikpeazụ ihe ị chọrọ ime bụ ọgụ banyere ego.